ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ ( ၁ ) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows ခွေများ » ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ ( ၁ )
By နေမင်းမောင်4:36 AM6 comments
ကျွန်တော် Windows ခွေတွေ မတင်ခင် ဘာကြောင့် OEM ကိုရွေးပြီး တင်ပေးလိုက်လည်း ဆိုတာကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ သူက ပြောပြပါမယ် .. ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ မှာ Windows တွေတင်မယ်ဆိုရင် တွေ့ကရာ ဖြစ်ကတက်ဆန်း Windows7၊ Windows XP ဆို ပြီးရော ဆိုပြီး မတင်ဖို့ မိမိတို့ တင်မဲ့ Windows ဟာ OEM Version ကို ရွေးပြီးသုံးဖို့ ပြောပါတယ် .. ဘာကြောင့် OEM Version ကိုရွေးပြီး သုံးသင့်လည်း ဆိုတော့ OEM Version ဟာ Latop ဆိုရင် သူရဲ့လက်တော့ အမျိုးအစား Windows အမျိုးအစားလိုက် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို Destop ဆိုရင်လည်း မ်ိမိတို့ Destop ရဲ့ Motherboard အမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ Error တွေ အများအပြား ကြုံလာခြင်း တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. သဘောကတော့ .. အမျိုးအစား တူတာကို ရွေးပြီးသုံးတဲ့အတွက် Windows တစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် Error နည်းနည်းနဲ့ ရေရှည်မှာ Windows Error တွေကြောင့် စိတ်ညစ်စရာမလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ..
ကျွန်တော့် လည်းလိုအပ်လို့ လိုက်ရှာထားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်လိုပဲ လိုအပ်တဲ့ သူတွေရှိရင်လည်း အလွယ်တကူ သုံးလို့ရအောင် ကျွန်တော် ရှာလို့ရတာလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အကုန်လုံးကို ဒေါင်းလော့ ချထားစေချင်ပါတယ် .. တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ် .. ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကတော့ နည်းနည်း များပါတယ် .. Direct Link ကနေပြီး Download ချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ရှာထားတဲ့ http://h33t.com/ ရဲ့ Link တွေကိုပဲ ကျွန်တော် ပြန်ညွန်းလိုက် ပါတော့မယ် .. Internet Connection မကောင်းလို့ အပိုင်းလိုက် ဒေါင်းလော့ချချင်တယ် တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ကျွန်တော့် ဆီမှာ နက်မကောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး 100 MB စီနဲ့ Ifile.it ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒါကတော့ Windows7SP1 OEM Version ပါ .. Hiren's BootCD ပါ ပါပြီးသားပါ .. အောက်မှာ သူရဲ့ Imformation တွေကိုလည်း မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..အားလုံးပေါင်း 4.06 GB ရှိပါတယ် ..
Windows7OEM Sp1 AIO Activated + Hiren's BootCD [Tested] [Original]
ှSoco October 24, 2011 at 5:43 PM
Part 1 ,2,3,4,5, ပြီးတော့ Part9ဖြစ်သွားပါတယ် ပြန်စစ် ပေးပါလား
Part 11, 12 error တက်နေပါတယ်...
နေမင်းမောင် October 24, 2011 at 5:58 PM
myom957@gmail.com November 30, 2011 at 9:58 PM
နေမင်းမောင် December 1, 2011 at 8:29 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို ဖြစ်နိုင်တာကတော့ USB ကတစ်ခုခုလွတ်နေလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်အကို .
မောက်စ် လဲပြီး တပ်ပြီးသုံးကြည့်လိုက်ပါအကို .. ဒါဆိုမောက်စ်ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်
မောင်ပါလ March 15, 2012 at 8:05 AM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ......... ၀င်းဒိုးခွေလာဒေါင်းသွားပါတယ်။ Part 12 ကိုဒေါင်းတာ removed file ပြနေတယ်အကို။ အပန်းမကြီးရင် ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။